डाक्टर गोविन्द केसीलाई कात्रोको तयारी गर्नेहरु… - Dainik Nepal
डाक्टर गोविन्द केसीलाई कात्रोको तयारी गर्नेहरु…
आश्विनी कोइराला २०७४ साउन २६ गते १९:२७
– आश्विनी कोइराला
सत्ता कति कुरुप र घिनलाग्दो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हिजो मतपत्र च्यात्नेदेखि आज डा. केसीका लागि कात्रोको तयारी गर्नेहरुबाट थाहा हुन्छ ।
हिजो पञ्चायती सरकारले तत्कालीन बिद्रोही नेता शेरबहादुरलाई जिब्रोमा करेन्ट लगायो । आज उनी प्रधानमन्त्री छन् तर राम्रोसँग बोल्न सक्दैनन् । जसको पीडा उनी र उनका परिवारलाई मात्र हुँदैन, तीन करोड नेपालीलाई पनि हुन्छ । उनको गल्ती यति मात्रै थियो, उनी जनतालाई स्वतन्त्रतासँग सुख शान्ति दिन चाहन्थे । त्यो बेलाको युवा जोशका कुरा सुन्दा उनीप्रति नमन गर्न मन लाग्छ ।
हिजो लामो समय जेल बसेका केपी शर्मा ओलीलाई पटकपटक बिजुलीको चुल्होमा पिसाब फेर्न लगाइयो । उनलाई पञ्चायती सरकारको समर्थन गर्न यो शैली अपनाइएको थियो । यो अस्हय पीडा खेप्न उनले पिसाब चेप्ने बानीको विकास गर्न थाले । उनले लामो समय पिसाब चेप्न सफल त भए, बदलामा दुबै किड्नी रोगी बनाए । उनको उद्देश्य पनि देउवा भन्दा फरक थिएन । उनको कथा सुन्दा पत्याउन मुस्किल पर्छ । आज उनी पनि सर्वप्रिय नेता छन् । उनको उपचारमा राज्यले करोडौं खर्च गर्नु परिरहेको छ । यसले हामी सबैलाई पिडा दिन्छ ।
नेकपा केन्द्र र अन्य माओवादी दलसँग सम्बन्धित नेता को कुरा त अझै चिन्ता जनक छ । देशमा साम्यवादी साशन ल्याएर जनता लाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थको यति ठूलो सपना उनीहरुले देखेका थिए, जसका सपना सुनेर हजारौँ जनताले खुशीका साथ ज्यान अर्पण गरिदिए, केवल एक आदेशमा । आज ती व्यक्तिहरुलाई सरकारले शहिद घोषना गरेको मात्रै छैन, त्यसका लागि अर्बौ रकमको पनि निकासा भएको छ । यो पैसा जनताबाट करका रुपमा उठाएर पुर्ताल गरिएको छ ।
हामी सबै लाई थाहा छ, स्वतन्त्रता र समानताको सपना देखेर ज्यान गुमाउनेहरुलाई पनि हामीले सम्मान गर्यौं, सत्तामा पुग्नेहरुलाई चाहेको सुबिधा दियौं । किनभने उनीहरु जनताका लागि लडेका थिए र हाम्रा बिषयमा चिन्तित थिए ।
हिजो पञ्चायती सरकारले जस्तै देउवा, ओली र प्रचण्डहरु डा. गोविन्द केसीलाई मरणासन्न अवस्थामा पुर्याउँदै छन् ।
तर ती सबै कुरा भ्रम रहेछ भन्ने कुरा बिस्तारै थाहा हुँदैछ । जसले अनाहकमा ज्यान दिए, उनीहरुको सपनालाई दुइ चार लाखमा साटियो । जसले नेतृत्व गरेका थिए, आज उनीहरु नै पीडक भएर निस्किएका छन् । पत्याउनु भएन भने डा. केसीलाई हेरे पुग्छ ।
आखिर सरकार भनेको सरकार नै हुँदोरहेछ, चाहे पञ्चायती सरकार होस् वा केपी, प्रचण्ड र देउवाको सरकार । आज अर्का सर्वप्रिय डाक्टर अब जनताको नेता भैसकेका गोविन्द केसी पटकपटक आमरण अनसन बसेर आफ्नो स्वास्थ्य बिगारी रहेका छन् । हिजो पञ्चायती सरकारले जस्तै देउवा, ओली र प्रचण्डहरु डा. गोविन्द केसीलाई मरणासन्न अवस्थामा पुर्याउँदै छन् ।
यो सत्ता कति कुरुप र घिनलाग्दो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हिजो मतपत्र च्यात्नेदेखि आज डा. केसीका लागि कात्रोको तयारी गर्नेहरुबाट थाहा हुन्छ ।
कोइराला चर्चित लेखक हुन् ।